Football Khabar » खेल्न नपाएपछि नाभास पिएसजीतर्फ : रियल मड्रिडलाई गरे बाई–बाई !
खेल्न नपाएपछि नाभास पिएसजीतर्फ : रियल मड्रिडलाई गरे बाई–बाई !
एजेन्सी, भदौ १६
बेल्जियन गोलकिपर थिबाउट कोर्टुवाको अनुबन्धपछि दोस्रो रोजाइमा सीमित भएका स्पेनिस रियल मड्रिडका गोलकिपर केलर नाभासले क्लब छाडेका छन् । उनी रियल छाडेर फ्रेन्च क्लब पिएसजीमा अनुबन्ध हुने प्रक्रियामा छन् । रियलमा पहिलो रोजाइमा नपर्ने भएपछि उनले जिनेदिन जिदानको टोली छाड्ने निर्णय गरेका हुन् ।
फ्रेन्च लिग वान च्याम्पियन पिएसजीले नाभास अनुबन्ध गर्न रियल मड्रिडलाई १५ मिलियन युरो तिरेको छ । रियलले नाभास दिने र पिएसजीका गोलकिपर अल्फोन्स आरिओलालाई एक सिजन आफूले लोनमा लिने सर्तअनुसार नाभास रियल छाडेर गएका हुन् ।
यता, रियलले नाभास जाने पक्का भएपछि पिएसजीका आारिओला अनुबन्धको औपचारिक घोषणा पनि गरिसकेको छ । नाभास पिएसजी लागिसकेका छन् । र, पिएसजीले उनलाई मंगलबार र बुधबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
रियलमा अब कोर्टुवा पहिलो रोजाइका गोलकिपर बन्दा दोस्रो रोजाइमा आरिओलासँगै आन्द्रीय लुनिन रहनेछन् । ३२ वर्षीय नाभासलाई रियलले सन् २०१४ मा ला लिगा क्लब लेभान्टेबाट १० मिलियन युरोमा अनुबन्ध गरेको थियो । नाभासले रियलबाट तीन च्याम्पियन्स लिगसहित एक ला लिगा जितेका छन् । यसअघि रियलले लगातार तीन सिजन च्याम्पियन्स लिग जित्दा नाभासले गोलकिपरको भूमिकामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए ।
प्रकाशित मिति १६ भाद्र २०७६, सोमबार १६:०९